Ihe 5 Mgbe Select Na-ahọpụta Voice Gị n’elu Talent Maka Oke Mmetụta | Martech Zone
Anyị emeela mmekọrịta dị ukwuu site na ọtụtụ ikike olu olu karịa afọ. Amanda smụnna bụ otu n'ime talent anyị goto, yana Paul na Joyce Poteet. Ma ọ bụ vidiyo na-akọwa nkọwa zuru ezu ma ọ bụ nkwanye Podcast, anyị maara na ịchọta olu ziri ezi karịa talent enweela mmetụta pụrụ iche na ogo mmepụta anyị.
Dị ka ihe atụ, Pọl na obodo Indianapolis bụkwa otu ihe. Ọ nọla na redio, telivishọn, ma bụrụ olu olu maka ọtụtụ ụdị dị iche iche na mpaghara ahụ. Nihi na olu ya bu ihe puru iche nke puru icheputa, anyi na-anwa iji ya mee ihe dika ike anyi di na oru Indianapolis. Ọ dịkwa oke mma, ọ na-edekọ ụdị dị iche iche maka anyị ịhọrọ. Akụkụ akụkụ - ọ bụkwa naanị otu onye nwere obi ụtọ, na-atọ ọchị!
Voices.com na - ewepụta olu kwa afọ gbasara akụkọ na - enye aka site na ihe karịrị ndị ọkachamara okike 1,000 na mba ụwa, gụnyere ndị na - emepụta ihe, ndị na - ahụ maka izi ihe, ndị na - eme ihe nkiri, akwụkwọ ndekọ azụmahịa, usoro mgbasa ozi na ndị ahịa. Ha weputara ihe omuma a nke na enye nyocha banyere udiri olu, olu okwu, asusu, na obula ahia.
Fọdụ nchoputa isi na Voice over Marketing:
Mpaghara olu dị oke mkpa itinye aka na ahịa; n’ihi ya, ọchịchọ maka akara ụda na-eto.
International ọchịchọ na-arị elu, na arịrịọ na-abụghị Bekee na-eto site na 60% site na 2016 ruo 2017 ka ahịa ụwa na-aga n’ihu ịgbasa.
Narị Afọ Iri na nke Agadi Ọganihu ahịa enweela mmetụta na afọ olu n'elu talent dị ka ndị na-ere ahịa na ndị mgbasa ozi na-arịọ talent nke bụ otu afọ ahụ ahịa ha lekwasịrị anya.
Ka ị na-ele anya iji mee ka ahịa na mgbasa ozi gị iji olu dị elu karịa ikike, buru n'uche na olu ndị sitere n'okike ka na-etinyekwu na ndị na-azụ ahịa karịa olu sịntetik na mkpa maka olu nwanyị na-eto ngwa ngwa karịa ụmụ nwoke. Ka ị na-achọ ịtụ ahịa ahịa ma ọ bụ mgbasa ozi ọzọ gị, buru ihe ndị a n'uche:
Olu gi kariri talent kwesiri ime ka obi gi na ndi gi na ha na-ekwu okwu.
Olu gi kariri talent kwesiri ikwe ka ika gi.
Olu gi kariri talent kwesiri ikwe ka ndi ghotara gi.
Olu gi karie talent kwesiri inwe udiri mmadu.
Voiceda olu gị kwesịrị ịda ụda na-achọsi ike n'ahịa ịchọrọ.
Banye na Free!
Tags: amanda ibeotúọceụ poteetpaul onyinyeolukwuo okwuolu n'elu nkedoolu.com